မြစ်ဆုံ: ထူးဆန်းသောအပူထုတ်ခန်း(သို.) ခရီးသွား မှတ်စု
ထူးဆန်းသောအပူထုတ်ခန်း(သို.) ခရီးသွား မှတ်စု
တော်တော်ကြာသွားသည်။ အပူထုတ်ခန်းဟု နာမည်တပ်ထားသည်.နှင်. ကျွန်တော်တို.လို အပူပိုင်းဒေသ နိုင်ငံများတွင် ရှိနိုင်မည်မဟုတ်ချေ။ လိုအပ်မည်လည်း မဟုတ်ချေ။ ဂျပန်ဇတ်လမ်းတွေ ကြည်.ဖူးသည်.သူများတော. မြင်ဖူးကြလိမ်.မည်ဟုထင်သည်။နပန်းသမားကြီးတွေရေမချိုးဘဲထိုင်နေကြသည်
ဘာကြောင်.ပါလိမ်.ဆိုတာခုမှသိရတော.သည်။ ရွာလေးတွေမှာ အပန်းဖြေစခန်းရှိကြသော ရုရှားလူမျိုးအများစုသည်အပူထုတ်ခန်းခေါ်ဘန်းညာ(ရုရှားနာမည်)ကို ငွေအကုန်ခံပြီးကိုတည်ဆောက်ထားကြ
အပူထုတ်ခန်းအတွက် အဓိက နေရာ
ထိုဘန်းညာ၏အလုပ်လုပ် ပုံမှာ ထင်းမီးဖြင်. ရေနွေးအိုးကို အပူပေးသည်။ ရေနွေးအိုးမှာ စည်ပိုင်းပြတ်အရွယ်အစားခန်.ရှိ၏။မီးဖို၏မီးခိုးထွက်ရာခေါင်းတိုင်ကိုအပူထုတ်မည်.အခန်းမှာရေနွေးပူအိုးနှင်.
သည်။ ခေါင်းတိုင် အပူ ၊ ကျောက်မီးသွေးအပူ ၊ ရေနွေးပူအိုး အပူ တို.ဖြင်. အခန်းကို အပူပေးထားသည်။ထို.အပြင်အခန်းနံရံ၊အခန်းမျက်နာကျက်ကိုလည်းခေါင်းတိုင်မှတဆင်.အပူဝင်နေအာင်ပြု
သာတပ်ဆင်ထားသည်။ အခန်းတည်ဆောက်ရာတွင် သုံးထားသည်.သစ်အမျိုးအစားကလည်း အပူစီးနေဖို. အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။တင်ထားသည်. ပုံတွေကိုကြည်.ရင် ပိုရှင်းသွားမည်။
ဖျားနာကြသည်.အခါအနွေးထည်ထူထူကြီးတွေဝတ် စောင်တွေ အများကြီးခြုံကာ အပူထုတ်ခဲ.ဖူးသည်. သူတိုင်း အတွက် အပူထုတ်ပြီးလျှင် ဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတာ သိမှာပါ။ အပူထုတ်ခန်းမှာ ပူထုတ်တာကလည်း ထို.အတူပါဘဲ။ သို.သော် အပူထုတ်တာခြင်းတူပေသော်ငြားလည်း မတူတာလေးတွေတော.ရှိပါသည်။ ဖျားနာနေသောသူများ အပူထုတ်ခန်းထည်.သို. ၀င်ပြီး အပူထုတ်၍မရပါ။ အပူချိန်မြင်.မားလွန်းသောကြောင်.ဖြစ်ပါသည်။ သာမာန်လူတွေ အားလုံး အပူထုတ်နိုင်ပါသည်။ ညနေ နေ၀င်သွားသည်.အချိန်နှင်.ညဦးအချိန်များသည်အပူထုတ်.ဖို.အသင်.လျော်ဆုံးအချိန်များဖြစ်ပါသည်။
တစ်နေ.လုံးညောင်းညာကိုက်ခဲနေသည်များသည်အပူထုတ်ခန်းထည်းတွင်နာရီဝက် ၊တစ်နာရီခန်.၀င် လိုက်သည်နှင်. အကိုက်အခဲများပြေပျောက်သွားကာ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ပေါ.ပါးလန်းဆန်းသွားလေသည်။
အရွက် တစ်ခုဖြင်. ရိုက်ပေးနေသည်.ပုံ နာရီဝက်၊တစ်နာရီခန်.ဆိုသည်မှာအပူထုတ်သည်.ပင်မအခန်းထည်းတွင်သာရှိနေမည်အချိန်မဟုတ်ပါ။ ပင်မအခန်းထည်းတွင်ငါးမိနစ်၊ဆယ်မိနစ်အချိန်အတွင်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ချွေးတွေအနှံအပြားထွက်လာမည်။
ရေချိုးထားသကဲ.သို.ချွေးများထွက်လာပါကရေပူရေအေးစပ်ထားသောရေ(သို.မဟုတ်)ရေအေးသီးသန်. ဖြင်. အနည်းငယ် ခေါင်းမုစပြီး တစ်ခွက်၊ နှစ်ခွက်ခန်.လောင်းကာ အပူထုတ်ခန်းမှထွက်ပြီး နားနေရာကော်ရတာ(သို.)အခန်းတွင်ခေတ္တအနားယူရသည်။ထိုအခိုက်အတန်ု.တွင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအပူ
ငွေ.များထွက်ကာတစ်ရှိုန်းရှိုန်းနှင်.အင်မတန်နေ.လို.ကောင်းပါသည်။နားနေခန်းတွင် ရေ (သို.) ဘီယာ ( သို.)အအေးကြိုက်နှစ်သက်ရာတစ်ခုခုသာက်သင်.ပါသည်ချွေးများစွာကုန်ဆုံးသောကြောင်.ရေဓါတ်ခန်းခြောက်ခြင်း
ယခုကဲ.သို. ခေါင်းတိုင်နှင်. ကျောက်မီးသွေးများကို ရေဖြန်းပေးပါကအပူချိန်ပိုပိုပြီး မြင်.မားလာစေပါသည်
အပူခန်းအတွက် မီးဖိုနေရာနှင်. ထင်းခြောက်များ
ထူးခြားသည်မှာ အပူထုတ်ခန်းတွင်ဝင်သည်.အခါလှဲလျောင်းခိုင်းပြီး အရွက်တစ်မျိုး(နာမည်မသိပါ)ကို စီးထားပြီးး ရေနွေးတွင်ခေတ္တခန စိမ်ကာ ခြေဖျားကနေစပြီး ကျောထိကို တစ်ဖြန်းဖြန်းနဲ. ရိုက်ခြင်း ဘဲ ဖြစ်သည်။ရေနွေးစက်တွေ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကျစမှာ အတန်ငယ်ခန်. ပူသွားသွားသည်.အချိန်မှာ အရွက်ဖြင်. ခန္ဓာကိုယ်အနှံ.ခပ်ပြင်းပြင်းရိုက်လေသည်။အလုပ်ပင်ပန်းထားသော နေ.များတွင် ထိုကဲ.သို. အရွက်ဖြင်. ရိုက်ပါက ပင်ပန်းထားသမျှ ပြေပျောက်သွားပါသည်။ ကိုယ်တိုင်လက်တွေ.ကြုံခဲ.ရခြင်းဖြစ်သည်။ ကန်.သတ်ချက်များကတော. အပူထုတ်ခန်းကို အသုံးပြုမည်ဆိုပါက အချိန် (၂) နာရီခန်.ကြိုပြီး မီးမွှေးကာရေနွေးပူအိုးက အပူပေးရပါသည်။ ထို.အတွက် လုံလောက်သော ထင်းခြောက်ကို မီးဖိုနားတွင်ကြိုတင်စုစောင်းထားရသည်။ အပူထုတ်ခန်း၏ အ၀င်တံခါးကို လုံအောင်ပိတ်ရပါသည်။ အ၀င်အထွက်ပြုလုပ်တိုင်းလည်းတံခါးကိုသေချာစွာပိတ်ရသည်။အခန်းထည်းတွင်အပူချိန်မကျသွားစေဖို.
အတွက်ဖြစ်သည်။လိုအပ်ပါကအန္တရာယ်ကင်းစေရန်(သို.)ခေါင်းအပူသက်သာစေရန်သီးသန်.ပြုလုပ်ထားသော ဦးထုပ်ကိုဆောင်းနိုင်ပါသည်။အပူထုတ်ခန်းကို ပုံတွေနဲ. တွဲပြီး ဖတ်ပါက ပိုပြီး ရှင်းလင်း နားလည်မည်ဟု ထင်မိပါသည်။
အလုပ်အနည်းငယ်ခန်.များနေသောကြောင်.ပိုစ်အသစ်ကိုယခုမှတင်နိုင်တာခွင်.လွှတ်ပါ။အလည်လာသူဘ လော်ဂါ များစာဖတ်သူများကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါသည်။ ဘလော်ဂါ မိတ်ဆွေများထံသို.လည်း စာသာဝင်ဖတ်နိုင်ပြီး ကွန်မန်း ပေးခြင်း ၊စီဘောက်တွင် ခြေရာချန်ခြင်းများ မပြုလုပ်နိုင်ခဲ.ခြင်းကိုလည်း နားလည်ပေးပါခင်ဗျာ။
Posted by မောင်မောင် at 15:31
ပုံတွေကြည့်ပြီးတော့ အပူထုတ်သွားကြောင်းပါ အကို... ရုရှားမှာ အတော်အေးနေလားဗျ။
မောင်မောင်သွားခဲ့တာလားကွယ်..အင်ပေါ့ သွားနိင်တဲ့သူတွေကို :)
အပူထုတ်ခန်း(ခေါ်)ဘန်းညာ အကြောင်း အသေးစိတ်ရေးထားတာ စိတ်ဝင်စားစရာပဲ မောင်မောင်ရေ။ လူကိုရိုက်တဲ့ အမည်မသိအရွက်ဆိုတာ ပင်ပန်းမှုကို ပြေပျောက်စေတယ်ဆိုတော့ ဆေးဘက်ဝင်အရွက်မျိုးများလား။
ကြုံတုန်းလေး ခရီးသွားပို့စ်တွေပါ ဖတ်သွားပြီနော်း)
တနင်္သာရီတိုင်း၊ မြိတ်မြို.၊ ကမ်းနားလမ်းတွင် တည်ရှိသည်. အထက်ပါနေအိမ်သည် အလွန်တန်ဖိုးကြီးမားသည်. ငှက်သိုက်များ အန်ထုတ်ပေးသည်. ငှက်များအသ...
နိုင်ငံတကာ နယ်ပယ်တွင် ကျင်.သုံးနိုင်ရန်အတွက်
လက်ဆောင်ပေးခြင်း - အချို.သော အာရှယဉ်ကျေးမှု (အိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊တရုတ်)တို.မှာ လက်ဆောင်ပေးရာတွင် ကာယကံရှင် ရှေ.မှောက် ဖွင်.ပြတာမျိုး မလ...